यस्ता छन् मेवाका १५ फाइदा – Mission
यस्ता छन् मेवाका १५ फाइदा
मेवाका रुखको प्रत्येक भागमा कुनै न कुनै औषधिय गुण पाईन्छ । प्राचिनकालदेखि नै मेवाको पातहरू घाउ सफा गर्न, दाद र दुखाई निको पार्न प्रयोग गरिँदै आएको पाईन्छ । यसको जरामा पिसाब लगाउने शक्ति हुन्छ । मेवामा पर्याप्त मात्रामा क्यारोटेन नामको तत्व हुन्छ, जसले शरीरमा भिटामिन ए बनाँउछ ।
यसमा पोटासियम पनि पर्याप्त मात्रामा हुन्छ । साथै भोजन पचाउन चाहिने विभिन्न तत्व हुन्छन् । काँचो मेवा खानाले कब्जियतबाट छुट्कारा दिलाउँछ । पाकेको मेवा कलेजोको विभिन्न समस्या समाधानका लागि लाभदायक हुन्छ । झाडापाखाला लागेमा बेलामा पाकेको मेवाको सेवनले पाखाला बिस्तारै कम हुन्छ । कब्जियतमा पाकेको मेवाको २० देखि २५ वटा बीउ १० देखि १५ दिनसम्म दिनको २ पटक खाँदा कब्जियत हट्छ । मेवाको पातलाई आगोमा तताएर दुखेको ठाँउमा राख्दा दुखाई कम हुन्छ ।
मेवा रक्तअल्पता अर्थात् शरिरमा रगतको मात्रा कम हुँदा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । रक्तअल्पता हुँदा मेवाले औषधिको काम गर्छ । काँचो मेवाको तरकारी र पाकेको मेवा दिनमा २ ÷ ३ टुक्रा खाँदा सुत्केरीको दुध बढाउँछ । शरीरमा रगतको मात्रा वृद्धि गर्छ । यसले आँखालाई समेत फाईदा पु¥याउँछ । र, रतन्धो हुनबाट जोगाउँछ ।
४. पेटको समस्यामा
६ मलद्वारसंबन्धी समस्यामा
७. तौल घटाउन
८. बिहानीको वाकवाकीमा
११. स्याम्पुको रुपमा
१२. रजस्वला अनियमित भएकोमा
१३. कलेजोको क्यान्सरमा
१५. मिर्गौलाको समस्यामा
प्रकाशित मितिः बिहिबार, चैत्र ४, २०७२ 1:25:13 PM |
Prevशौचालयबाट भागेका अभियुक्त अझैं भेटिएनन्
Nextउत्तर कोरियामा अमेरिकी नागरिक बन्दी, अमेरिकाद्वारा रिहाईको माग